I-china Powder Metallurgy Structural Parts abakhiqizi nabaphakeli | Xuanyi
Lokhu kuphathelene nensimu ekhethekile ye-powder metallurgy, njengoba ukuminyana, i-porosity, izinto zokwakha kanye nezindlela zokwelashwa kokushisa kwama-powder metallurgy gear kuthinta ngqo ubulukhuni namandla. Ubuningi obukhulu bubhekisela kuzinto ze-alloy zobulukhuni obuphakeme, ama-pores amancane, ukuminyana okukhulu, okuhle Izindlela zokwelashwa ezishisayo zivame ukufaka ukuqedwa kwe-carburizing, i-carbonitriding, ukucisha imvamisa ephezulu, ukucima imvamisa ephansi, ukucima uwoyela, njll. Inqubo yokuqina nokufanelekayo yokuqeda ukucindezela kugcina ukuqina kokwelashwa kokushisa kuzinzile.
Ukuqina kokuqina kwemikhiqizo yensimbi ejwayelekile yensimbi ngesikhathi sokwelashwa kokushisa
Ubuningi be-powder evamile ene-atomised (kufaka phakathi i-carbon steel ne-copper-carbon alloy steel) ingaphezulu kuka-6.9, futhi ukuqina kobunzima kungalawulwa nge-HRC30.
Ngokuvamile, ubukhulu be-powder esetshenzisiwe ngaphambili (i-AB powder) yeqa u-6.95, nobulukhuni bokucima bungalawulwa nge-HRC35.
Ama-powders asetshenzisiwe aphezulu anesisindo esikhulu kuno-6.95 nokucisha ukuqina okulawulwa ku-HRC40.
Imikhiqizo yensimbi ye-Powder eyenziwe ngezinto ezingenhla inokuqina okuzinzile nezinto ezibonakalayo, futhi ubulukhuni ngemuva kokwelashwa kokushisa buhlangabezana nezidingo ezihambisanayo, ngakho-ke amandla abo okuqina namandla acindezelayo azofinyelela phezulu kakhulu.
Ingabe ubunzima bokwelashwa kokushisa kwe-powder metallurgy bungafinyelela ku-45 steel?
Kodwa-ke, ngenxa yokuthi ubukhulu bemikhiqizo ye-PM abuphakeme njengobukaNombolo 45 wensimbi, ukuminyana okuphezulu kakhulu kwezingxenye zokucindezela u-PM kuvame ukuba ngu-7.2 g / cm, kanti ukuminyana kwensimbi engu-45 kungu-7.9 g / cm. we-powder metallurgy noma we-high frequency heat treatment owedlula i-HRC45 kuzokwenza ukuthi imikhiqizo ye-metallurgy brittle ibe namandla ngenxa yokucima okuphezulu, okuholele emandleni emikhiqizo ye-powder metallurgy.
Okulandelayo, sizoqhathanisa igiya elenza i-P / M negiya lokulungisa ngomshini.
1.Izinga eliphakeme lokusetshenziswa kwempahla, lifinyelela ngaphezu kuka-95%
2. Akukho noma ukusika okuncane kuphela okudingekayo
3.Ukuhambisana okuhle kwezingxenye, ukuzinza okuhle nokunemba okuphezulu.
4. Ukuqhathaniswa kwamandla: abakhiqizi be-powder metallurgy abaqeqeshiwe benze ubuhle be-metallurgy mold design, futhi amandla okuqina namandla okucindezela amagiya akhiqizwayo aseduze kwalawo we-gear hobbing.Isibonelo, igiya eliqhutshwa u-gearbox wemoto onokudluliswa okuphezulu umfutho ubuye ube yimpuphu yokusansimbi.Ibonakalayo, i-powder metallurgy gear iyasebenza futhi ibanzi.
5. Powder ngokucindezela udini usebenzisa isikhunta udini, kungaba ukukhiqiza ezinye ahlabayo hobbing ubuchwepheshe abakwazi ukukhiqiza bobunjwa eziyinkimbinkimbi.
6. Ngoba ilungele ukukhiqizwa ngobuningi, ukusebenza kahle kokukhiqiza kuphezulu futhi izindleko ziphansi kunokusika.
7. Kufanelekile ukukhiqizwa ngobuningi, ngakho-ke intengo incintisana ngokuphelele.
Langaphambilini Izingxenye Zemoto
Izinto ze-Powder Metallurgy
I-Powder Metallurgy Pinion
Ukucindezela Powder Metallurgy Izingxenye
Engagqwali Powder Metallurgy Izingxenye Auto
Izingxenye ze-Stainless Steel Powder Metallurgy